Ingabe i-caffeine ibangela umdlavuza wendlala yesinye? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Umdlavuza we-Coffee Prostate - isisombululo ku
Umdlavuza we-Coffee Prostate - isisombululo ku
Ingabe i-caffeine ibangela umdlavuza wendlala yesinye?
Umdlavuza wekhofi nowendlala yesinye
Ucwaningo luphakamisa ukuthiikhofiukusetshenziswa akuhlotshaniswa nengozi eyengeziwe ye-umdlavuza wendlala yabesilisa. Ukuhlaziywa kwe-meta kweqembu eli-6futhiIzifundo ezi-5 zokulawulwa kwamacala azitholanga nethonya le-ikhofiukusetshenziswa engcupheni yokuthuthukaumdlavuza wendlala yabesilisa71.
UMA UFANANA NABANTU ABANINGI, BUSUKE UPHUZE INDEBE NOMA IKHEFU ELIMBILI. UCALIFORNIA UBHEKA ISIBONAKALISO SESEXWAYISO KUFAFO EMVA KOKUKHISHWA KWEZIMOTO UMA IKHOFU LISILE. USTEPHEN PRESCOTT, UMONGAMELI, WESISEKELO SOKUCWANGCISWA KWEZOKWENZA KWE-OKLAHOMA.
guqula ibhayisikili lomgwaqo libe ibhayisikili elintathu
SIYABONGA KAKHULU NGALAPHA, SIYABONGA, UMA LOKHU UNAMANGA, WONKE UMUNTU UKHULUMA. UTHINI? >> NGITHI IPHUZE IKHOFI LAKHO NGIJABULE. CISHE IZINKULUNGWANE ZEMIPHUMELA YEMPILO YEKHOFI.
NGEKE UBE NALUTHO OLUNGABANGELA I-CANCER. BESE USHIYA I-CALIFORNIA ENDE, UXWAYISA ABANTU. UKUVIKELA LUTHO. >> INGABE KUPHELA INANI? NGEMPELA YENZA ISIKHATHI ESENZA UMEHLUKO. >> OKUFANAYO KWENZEKA KWIMITHETHO YOMTHETHO WEZIMALI IMIKHAMBI ENGABANGELA UMdlavuza.
NGAKHO-KE KWAKUKHONA UKUBALULEKA OKUCABANGILE. SICABEKISEKILE KAKHULU KUZO ZONKE IZINTO ESICELA UKUTHI SIQHUBEKE NAKHO KONKE NGOKWE-KÜSTIN NS. >> UKUPHAWULA OKUJWAYELEKILE NGEKHOFI NEZINYE IZINTO OKUHLOLWE LOKHU.
UMA KUNOKUHLUKA, SIKUBONILE MANJE. SINGABONA IMIPHUMELA EMINCANE YOKUPHATHWA KWEZIFO EZIJWAYELEKILE EZOBA NZULU. SINGAQINISEKA NGAYO. >> UMA SIYAZI UKHOFU NGEKE LUSIBULalise, KUSIHLE NA? NOMA KUNGABI NGAPHANDLE? >> KUNOKUQINISEKA UKUTHI KUNEZIFUNDO ZOKWELASHWA EZIBONISA UKUTHI IKHOFI LIZOZUZWA.
FONELA FUTHI NGOKUSHESHA. NGANGEKE NGIKUNcomele Uphuze IKHOFI NGEMPILO YAKHO. IMPILO YAKHO YENGQONDO INGABE NGUMUNTU ANGAThathi HLANGO. >> NGABE KUNESIKHATHI SOKUSIKA ESIMELE SISIKE? >> Kwaqala ukuthinta ukulala kwami.
I-CAFFEINE IKWENZA USHAYISEKE KAKHULU. UMA UPHUZA IZINQUBO EZININGI, UNGAPHUZA ISINYE SEZI ZINTO NJENGOMTHELELA EKULALENI KWAKHO >> SINEMINYE IMIBUZO EFACEBOOK, KODWA ABANYE BATHI UMA NGINGENAYO IKHOFU LAMI NGIZOBALIMA ABANYE. KUNGANI UKUTHOLA KUPHELA LOKHO? IKHOFI SEKunesIKHATHI eside futhi senibasile IKHOFI KUYO YONKE LEMINYAKA. >> I-ACRYLAMIDE IFIKA LAPHO KUPHAKWA UKUDLA OKUHLUKILE.
KUKHONA WONKE AMAPHrotheni NAMA-CARBOHYDRATES. ABANTU SEKUDE BAFUNDA IMIPHUMELA YEMPILO ENGENZEKA NGENXA YALO MTHETHO OPHANSI LAPHO. >> Ngicabanga ukuthi SONKE SIZIZWA KANYE MANJE ESIKHONA PHANSI LAPHO.
STEPHEN PRESCOTT NGIYABONGA.
Ingabe ikhofi lilungile endlaleni yakho yesinye?
I-caffeine ingabacasula bobabiliindlala yesinyefuthiiisinye. Ucwaningo luthole ukuthi abesilisa abadla ama-234 mg noma ngaphezulu kwe-caffeine usuku ngalunye banamathuba angamaphesenti angama-72 okuthola ukungasebenzi komchamo uma kuqhathaniswa nabesilisa abaphuzayoiinani elincane le-caffeine.
Ngizokunikeza isixhumanisi salesi sihloko esithile ekugcineni kwalesi sihloko ukuze ukwazi ukusibona sonke. Lokhu kuholele emibuzweni eminingi ehlukene, kepha lowo ophindwe amahlandla ambalwa bekungukuthi, “Ingabe i-caffeine iyaqinisa ukuqina? Ingabe Ilungele Ukungasebenzi Kwe-Erectile? Ngizwile ucwaningo oluthi kunje? ”Ukusabela nokucabanga kwami ​​kokuqala kwaba ukuthi,“ Cha, akunjalo! Ngikubeke kwacaca endatshaneni ukuthi kungani kungenjalo, kubi kangakanani ngamahomoni akho futhi ngenxa yalokho kungaholela ekusebenzeni okungasebenzi kahle kwe-erectile. ”Kodwa bengingafuni ukuwuchitha ngamehlo lo mbuzo.
Ngokusobala angazi konke futhi ngifuna ukufunda okuningi ngangokunokwenzeka. Njengoba sekushiwo, lesi siteshi esakho nesezidingo ZAKHO. Ngakho-ke ngemba ngijula ​​...
Ngibe sengithola isifundo1 ngo-2015 esathola ukuthi amadoda aphuza cishe ama-milligrams angu-170-375 (mg) we-caffeine ngosuku ayencane amathuba okuthi abike ukungasebenzi kahle kwe-erectile (ED) kunalabo abenze lokhu (cishe izinkomishi ezi-2-3 zekhofi ). Kodwa-ke, abacwaningi babengazi kahle ukuthi kungani, kepha babenombono. Babhale ukuthi 'indlela ehlongozwayo yezinto eziphilayo ukuthi i-caffeine iheha imiphumela eminingi yezemithi'.
Lokhu kuholela ekuthambekeni kwemithambo ye-penile nezicubu ezibushelelezi ze-erectile ezigcwala umzimba we-cavernous futhi ngaleyo ndlela zenyuse ukugeleza kwegazi kuya ethangeni. Ngamanye amagama, imithambo nemisipha ebushelelezi iyakhululeka, ukugeleza kwegazi kuyathuthukiswa, futhi 'indawo yokuvuvukala' ethweni elenza ukwakhiwa igcwaliswa kalula ngegazi. Kulungile, lokho kuzwakala kuyithiyori enhle.
Abaphenyi babuye bathola ukuthi 'abakwazanga ukuthola ukuxhumana phakathi kwe-caffeine nokwenyuka kokuhamba kwegazi'. Njengokulingwa okuningi kwemitholampilo, kuhlale kunamaphutha nokwakhiwa okungalungile. Ngicubungule ngokujulile kumcabango 'wokugeleza kwegazi' futhi kunezifundo ezithile ezibonisa ukugeleza kwegazi okuthuthukile kuya ebuchosheni ngenxa ye-caffeine enomphumela ophambene, obangela i-vasoconstriction ngakho-ke ukuhamba kwegazi okungalungile.3 Ngakho yonke imiphumela emihle yeza kamuva iphikisiwe.
Iqiniso ukuthi akukho kulokhu okusho lutho. Njengoba kushiwo ku-athikili yami yasekuqaleni, izikhuthazi ezifana ne-caffeine zidala ama-spikes kuma-hormone okuxineka afana ne-cortisol kanye ne-adrenaline / epinephrine amazinga anciphisa amazinga e-testosterone futhi LOKHU kuzohlala njalo kuholela ekwehleni kokuqina. Ukungasho ukuthi i-caffeine nayo inyusa ukukhathazeka, okunciphisa ukusebenza.
Umgomo wakho ukuthi uhlala ufuna ukuthuthukisa ama-hormone akho, yilokho kuphela! Izinga lama-hormone elilungile nokulinganisela yisixazululo ESIKHULU KAKHULU sesikhathi eside, semvelo sokwenza ngcono impilo kanye nokwakhiwa. Kungumqondo olula, kepha onzima ukuwusebenzisa. Ngaphansi kwalesi sihloko, nginezixhumanisi ezimbili ezibalulekile okufanele uzihlole namuhla.
Eyodwa ilungele i-athikili yokuqala kunoma ngubani odla imikhiqizo ye-caffeine efana nekhofi, iziphuzo zamandla, izikhuthazi zangaphambi kokuzivocavoca noma imikhiqizo efanayo. Futhi esinye yisisombululo esicwaningwe emtholampilo esisiza ukuthuthukisa ama-hormone akho, ukukhulisa amazinga e-testosterone, okuholela ekuvinjelweni okungcono nasekushayeleni ucansi - ngokomzimba nangokomzwelo. Ukuthandile lokho? Shaya inkinobho yokuthanda.
Siyabonga ngokulalela futhi ube nosuku olujabulisayo nolunempilo!
Yikuphi ukudla okungabulala umdlavuza wendlala yesinye?
Akukho okukhethekileukudlanoma iresiphi yokuthicanngqobulala umdlavuza wendlala yesinyeamaseli. Abanyeukudla lokhokungasiza kuumdlavuza wendlala yabesilisaukuvimbela ukuvuselelwa nokubuyela emuva kufaka phakathiukudlaequkethe i-lycopene, ubhontshisi, itiye eliluhlaza, i-cruciferousimifinonezithelo ezinjengama-cranberries, ama-strawberry, ama-blueberries namapomegranati.UMar 31 2021
(idrama yomculo wezinsimbi) - Ngithanda ukuxazulula izinkinga. Ngithanda ukungena kuzo futhi uma ngenza amaphutha ayi-10 kulungile, ngizowasusa lawo maphutha ayi-10 bese ekugcineni ngithole ukuthi yini okufanele ngiyenze. Nginguprofesa wobunjiniyela bemishini e-UC Berkeley ngangihlale ngikujabulela ukuzivocavoca umzimba.
Ngigijima yonke indawo. Angikaze ngihlale emotweni. Ngaqala i-baseball encane nendodana yami ngineminyaka engu-10 noma engu-11.
Ngatholwa nginesifo somdlavuza ngoNovemba 2014 ngemuva kwesikhathi eside sonyaka nengxenye yokungakhululeki ngemuva kwesikhathi eside sonyaka nengxenye sokungakhululeki futhi ngesinye isikhathi ngenza nje igrafu encane futhi yavele yabuyela emuva ngokushesha okukhulu . Ngikhumbula ngicabanga, ngaleli zinga, ngiqonde ukuthi, ngeke ngiphile ezinyangeni ezintathu. I-biopsy ikhombise umdlavuza osakazeke kakhulu futhi osezingeni eliphakeme ku-prostate yami.
Yayisidlulele kuma-lymph node nakwezinye izingxenye zemithambo yegazi esinyeni nasesifubeni, yaqala ukwelashwa ngama-hormone ngosuku olulandelayo futhi ngokushesha yaqala i-chemotherapy - Lapho sithola ukuthi ukuxilongwa kuka-Andy, sasazi ukuthi kubi. Okokuqala, ngacwaninga njengobuhlanya, ingabe zikhona izifundo? Ngicabanga ukuthi isimo sesifo besinjengokuthi akukho lutho lapha. - Futhi-ke sanconywa ngabangane eMD Anderson eHouston.
UJohanna wenze okuningi ngomlenze ukwenza lokho kwenzeke. Uyazi, ngicabanga ukuthi ukube uJohanna ubengekho lapho ukungisiza ngokuphathwa kwezinto, phakathi kwezinye izinto, kuyesabisa kakhulu. Kepha abantu abenele basikhuthaza ukuthi kufanele siye kanye.
Angikukhathaleli neze ukuhamba nhlobo. Empeleni kungenza ngizizwe sengathi ngithatha izinto ngokungathi sína futhi ngenza konke engingakwenza. Ngahlinzwa lapho ngoJuni 2015 futhi ngaqala ukuhlolwa kwami ​​komtholampilo kungakapheli nonyaka ngemuva kokutholakala kwami. - U-Andy wayethola i-immunotherapy ebizwa nge-asipilimumab noma i-Yervoy.
Kungumuthi ophula amabhuleki okwesikhashana kuma-T cell, angamaseli omzimba asiza ukulwa nomdlavuza. - Futhi-ke nansi le nketho yento ebithandeka kakhulu. Yebo, nakho bekusabisa kancane ngoba kukhona yonke le miphumela engemihle, kepha sonke besikhona.
Besifuna ukuqhubekela phambili futhi sikwenze kwenzeke - bekufanele nginikezwe imithamo emine ye-ipilimumab njalo emavikini amathathu. Ngigcine ngithola kuphela ukwelashwa okuthathu - u-Andy empeleni wenza omunye wemiphumela emibi kakhulu yale immunotherapy lapho amaseli omzimba ahlasela isikhumba sakhe futhi abangela ukuqubuka. Kodwa-ke, u-Andy empeleni waba nokuphendula okuhle kakhulu esikubonile ngomdlavuza wendlala yabesilisa - uDkt.
USubudhi uthe, uyazi, amasosha akho omzimba aphakeme ngokufanele, futhi ngeke sithole lelo nani lesine. Kepha baphikisa ngokuthi kwakungejwayelekile. Ufunde ngempela ukuthi ungayenza kanjani i-dosing. - U-Andy udelela zonke izingqinamba.
ungakwazi ukuzivocavoca ngemuva kokugomela i-covid
Ezigulini ezinjengoAndy, ukusinda okumaphakathi bekungalinganiswa cishe eminyakeni emibili kuya kwemine futhi ngikholwa ukuthi lolu cwaningo lushintshe kakhulu lokho kubikezela. Ngemuva konyaka eqale ukwelashwa kwakhe, wangithumelela isithombe sakhe wathi, 'Ngizophuma unyaka bese ngabelana ngalokhu nabanye' beqembu lethu bese ngithi yingakho senza lokho esikwenzayo. - Ukubamba iqhaza esifundweni kunginike ithemba elikhulu.
I-Immunotherapy ingunyaka nohhafu kamuva futhi ngizizwa ngijabule. Ngiyasebenza, yize ngibe nokuthuthuka okuncane kwi-PSAI yami, ngibonga ukubamba iqhaza ocwaningweni, futhi ngingenza noma yisiphi esinye isifundo ngokushesha ngangokunokwenzeka uma ngithole ithuba. - Ngisebenzisa i-immunotherapy futhi ngingenalo noma yiluphi uhlobo lokwelashwa ngoba unyaka odlule ube yimpumelelo enkulu kimi.
Lelo elinye ithemba elikhulu. Kukhona ukuqhuma ngaso sonke isikhathi. Ngikumangaza ukuthi izinto zishintsha ngokushesha kangakanani. - I-Immunotherapy izoba yindlela yokwelashwa entsha futhi ehlala njalo yomdlavuza.
Njengoba kunikezwe ukuthi iCancer Research Institute inhloso enkulu ukukhulisa imali nokuqonda i-immunotherapy. Kubukeka kuyinto enhle futhi ekugcineni kuzoshintsha izimpilo eziningi zibe ngcono. (umculo omnandi wezinsimbi)
Ingabe ikhofi lehla amazinga e-PSA?
Ngabe utshwala nomaikhofiukusetshenziswa kwe-skew imiphumela? Utshwala neziphuzo ezine-caffeine akuzona izinto ezisunguliwe zomdlavuza wesinye futhi ngeke zithinteAmazinga we-PSA.Sep 4 2020
Ngakho-ke ake sixoxe ngokungemuva kwe-prostate enwetshiwe engaphazamisa ukuchama kwakho. Njengoba amadoda ekhula, i-prostate yawo iyakhula futhi ibheke ukuthi ikuphi i-prostate. Isinye se-Urinary Uma ukhulisa i-prostate, le tube iyavalwa futhi nekhono lakho lokuchama likhubazekile.
Udokotela uzonika imishanguzo ethile efana neFlomax, isibulala-magciwane, futhi mhlawumbe uzokwenza ukuhlolwa kwegazi futhi sikubone ezinyangeni eziyisithupha kodwa umbuzo wami uthi yini ebanga indlala eyandisiwe. Uma ubheka wonke ama-hormone akho, angahlukaniswa abe izigaba ezimbili ezihlukene isigaba esisodwa sibizwa ngokuthi i-anabolic kanti esinye isigaba sizoba yinto ethandekayo manje, i-anabolic ihlobene nokwakha okuthile, futhi izindlela zokwenza izinto zonakalisa ezinye ama-enzyme asekudleni kwawo Amabhulokhi wokwakha ayisisekelo adiliza ama-amino acid, ama-fatty acid, i-glucose njll. bese unawo wonke amahomoni ama-anabolic angena bese ethatha lezi zakhi zokwakha bese enza izicubu zomzimba ngawo.
Lapho i-Prostate ikhula kusobala ukuthi unayo le nto ye-anabolic ehamba kahle, uma sibheka wonke ama-hormone e-anabolic, sine-prolactin futhi mhlawumbe uzwile nge-prolactin kwabesifazane abancelisayo, kepha amadoda ane-prolactin futhi futhi uma iprolactin iphakeme kakhulu impela ingakhulisa usayizi wendlala yesinye futhi i-estrogen uqobo ingakhulisa usayizi wendlala futhi i-estrogen nayo inyusa ukukhishwa kweprolactin ngakho-ke unamanye amahomoni afana ne-DHT, uhlobo olunamandla kakhulu lwe-testosterone i-androgens Cortisol growth hormone igf number one eluhlobo olufana nokwanda kwe-hormone yokukhula ekhiqizwa yisibindi ikhuthazwa yi-hormone yokukhula nakanjani izokwandisa i-prostate futhi une-Pro Gesterone ne-Insulin eyi-hormone enamandla kakhulu ye-anabolic . Ngakho-ke nakhu ukubheka ukuthi yikuphi ukudla noma into equkethe la ma-hormone amaningi ongawadla njalo Ubisi luyinto enamandla kakhulu ye-anabolic eyenziwe ushizi. I-yogurt kefir nobisi kuqukethe iningi lala mahomoni ama-anabolic.
Ngakho-ke uma unezinkinga zokuchama noma i-prostate yakho ikhulisiwe udinga ukuthi u-100% uyeke ubisi nemikhiqizo yobisi ngakho-ke uma indlala yakho ikhulisiwe noma unezinkinga zokuchama, udinga ukususa ushukela bese wenza uhlelo lwe-ketogenic. Uma umusha esiteshini sami ngizofaka isixhumanisi esingezansi bese sine-estrogen, kulungile ngakho-ke i-estrogen ingavela emithonjeni eminingi ehlukahlukene isoya ingumthombo omkhulu we-estrogen. Ngakho-ke uma udla okuthile okunjengobisi lwe-soy noma amaprotheni e-soya ahlukanisa amaprotheni, futhi mhlawumbe ukudla okunyakazayo okuthathayo noma cha, lapho udla ukudla okuphilayo, onakho imifino yokuthengisa noma ukudla okunamakhemikhali amaningi alingisa i-estrogen.
Lokhu kungaba yinto enkulu ekhulisa usayizi wendlala yakho yesinye. Abantu abaningi bathatha amakhambi wemvelo wendlala yesinye njengentende kasawoti futhi ngoba usawoti i-palmetto ivimbela i-enzyme ethile evamise ukuguqula i-testosterone ibe uhlobo olunamandla kakhulu lwe-testosterone olubizwa nge-DHT olungakhulisa i-prostate, okuthile okusayo ngeke kusebenze ngakho-ke ngincoma ubisi imikhiqizo isika imbewu yamathanga i-zinc ne-lycopene manje, i-lycopene nayo inocwaningo olukhulu olungasiza ekunciphiseni i-prostate futhi okungaba notamatisi obuningi, ngakho-ke utamatisi kungaba ukudla okuhle uma une-prostate enwetshiwe. Ngakho-ke uma udla ukudla noma ufuna ukwenza umuntu one-prostate enwetshiwe, hhayi nje i-keto enempilo nokuzila ukudla ngezikhathi ezithile, kepha ngingadla imifino eningi kakhulu ye-cruciferous ikakhulukazi i-kale ngoba lokho - gxila lapha ekugwemeni indawo okuyo, kepha kuthiwani ngokwandisa amasosha omzimba wakho uhlelo olulahlekile kule nkambo lukukhombisa ukuthi ungazivikela kanjani ku-bullet ngokwakho nokuthi ungakubekezelela kanjani futhi umelane nendawo ekuzungezile kangcono kakhulu ngokwandisa amasosha akho omzimba ngifaka isixhumanisi ezansi kwencazelo ngezansi kwesokudla sikubheke bese ubhalisa namuhla
Ungaphila iminyaka engama-20 ngomdlavuza wendlala yesinye?
Amadoda ane-Gleason 7 no-8 kuya ku-10 izimila atholakale esengozini enkulu yokufa ngenxaumdlavuza wendlala yabesilisa. NgemuvaIminyaka engama-20, zingu-3 kuphela kwezi-217 iziguli ezisindile. Abesilisa abanezifo ezisezingeni eliphakathi nendawo banobungozi obuphakathi bokuqongelelaumdlavuza wendlala yabesilisaukuqhubeka ngemuvaIminyaka engama-20kokulandelela.
Ngabe Ubhiya Ububi nge-Prostate?
Ucwaningo olubandakanya abesilisa abangu-3 927 eGreater Montreal luthole ukuthi ukuphuza i- aubhiyansuku zonke esikhathini eside kuhlotshaniswa nengozi eyengeziwe yokuba nolakaindlala yesinyeumdlavuza.Septhemba 5 2018
Yikuphi ukuzivocavoca okulungele i-prostate?
Izinhlobo ezahlukahlukene zeukuzivocavoca umzimbakungaba njalokuyasizayamadoda aneindlala yesinyeizinkinga noma i-OAB. UKegelukuzivocavoca umzimbaingaqinisa futhi iqeqeshe imisipha yakho ye-pelvic ukusiza ukulawula ukuchama.Ukuzivocavoca umzimbanjengokuhamba, ukugijima, ukubhukuda, nethenisi nakhokuzuzisa.
Ingabe ubhanana ulungele umdlavuza wendlala yesinye?
Le miphumela ikhombisa ukuthi ukukhishwa kwe-methanol ye-ibhananaikhasi lingavimbela i-5alpha-reductase futhi kungenzekaewusizoekwelapheni ubungoziindlala yesinyei-hyperplasia.Septhemba 7 2009
Ingabe iwayini elibomvu lilungele i-prostate?
Ucwaningo olusha lukhombisa abesilisa abaphuza izingilazi ezine noma ngaphezulu zeiwayini elibomvungesonto unengozi ecishe ibe ngama-50% engaphansiindlala yesinyeumdlavuza kunabantu abangaphuzi. Ngaphezu kwalokho, abacwaningi bakuthola lokhoiwayini elibomvuimiphumela yokuzivikela ibonakala iqina kakhulu uma iqhathaniswa nezinhlobo eziyingozi kakhulu nezinolaka ze-indlala yesinyeumdlavuza.Sep 23 2004
Ngabe umdlavuza wendlala yabesilisa ukubulala kanjani ekugcineni?
Iningiumdlavuzaamaseli agqashuka ku-indlala yesinyeafe. Kepha kwesinye isikhathi zisakazeka kwezinye izitho bese ziqala izicubu ezintsha. Kuthuthukileumdlavuza wendlala yabesilisaivame ukungena kuma-lymph node noma emathanjeni ngaphambi kokusakazeka kwezinye izitho. Okungajwayelekile kusakazeka emaphashini, esibindini, noma ebuchosheni.
Ngabe ukhona osinda esigabeni 4 somdlavuza wendlala yesinye?
Isiteji-4 Umdlavuza Wendlala Yesinye(IV)
Lesi esokugcinaisigabayeumdlavuza wendlala yabesilisafuthi ichaza aisimilaukuthihasusakazekele kwezinye izingxenye zomzimba, kufaka phakathi ama-lymph node, amaphaphu, isibindi, amathambo, noma isinye. Kulabaumdlavuza, iminyaka emihlanuukusindaisilinganiso singama-29%.
Ikhofi lixhumeke kanjani engcupheni ephansi yomdlavuza wesinye?
Abaphenyi babala ukuthi cishe kwehle iphesenti elilodwa engcupheni yenkomishi yekhofi yansuku zonke eyengeziwe. Eziyishumi nane zezifundo zithathwa njengekhwalithi ephezulu, ngaphandle kwengozi yokuchema, futhi usayizi omkhulu wesampula unikeza ukubuyekeza amandla amakhulu.
Hlobo luni lomdlavuza ongaluthola ngokuphuza ikhofi?
Baphinde bathola ukuthi ukuphuza ikhofi akuyona imbangela yamabele webele, amanyikwe, nomdlavuza wendlala yesinye, kepha kunganciphisa ubungozi be-endometrium yesibeletho nomdlavuza wesibindi. Ubufakazi kwahlulelwa ukuthi abuzanele ezinye izinhlobo zomdlavuza.
Ingabe kubi ukuphuza inkomishi yekhofi ngosuku?
Olunye ucwaningo mayelana nokusetshenziswa kwekhofi luthi izinkomishi ezine noma ngaphezulu zekhofi ngosuku zingaholela engcupheni enciphile yokuphindeka komdlavuza wendlala kanye nokwanda kwalesi sifo.